openSUSE Leap 15.2 dị ugbu a yana nkwado maka ụfọdụ AI | Site na Linux
Newdị ọhụrụ nke emegheSUSE Leap 15.2 mechara hapụ ya ma na-abịa na ụfọdụ bara uru mgbanwe na ndozi, nkes gosipụtara nkwado agbakwunyere maka ịrụ ọrụ na ụfọdụ ngwaọrụ ọgụgụ isi (AI) dị ka Tensorflow, PyTorch na Prometheus, yana ndozi maka ịrụ ọrụ na arịa.
Maka ndị na-amaghị ọrụ ahụ OpenSUSE, ha kwesiri ima na bụ mbọ iji kwalite Linux n'ọnọdụ niile., na-achịkwa obodo ya ma dabere na onyinye sitere n'aka ndị na-arụ ọrụ dị ka ndị nnwale, ndị edemede, ndị ntụgharị okwu, ndị ọkachamara ergonomics, ndị nnọchi anya mba, ma ọ bụ ndị mmepe.
Ọ bụ ọrụ na na-ekpuchi ọtụtụ teknụzụ na nkesa OpenSUSE Leap na-abia dika sistemụ arụmọrụ zuru oke, kwụsie ike ma dịkwa mfe iji.
1 Top nke ohuru na emegheSUSE Leap 15.2
2 BudataSUSE Leap 15.2
Top nke ohuru na emegheSUSE Leap 15.2
Versiondị ọhụrụ nke OpenSUSE Leap 15.2 gụnyere mmelite nche, nchịkọta ọhụrụ dị mkpa, mmezi ahụhụ na ndozi ndị ọzọ.
Mana nke mgbanwe niile esonyere na OpenSUSE Leap 15.2, otu n'ime isi na nke enwere ike ịtụle dị ka ihe bụ isi bụ na ugbu a nkesa nwere ike jiri igwe ihe omuma na ngwa na mmụta miri emi site na nkwado agbakwunyere maka Tensorflow, PyTorch, ONNX, Grafana na Prometheus.
Banyere usoro kernel, Anyị nwere ike ịchọta Linux Kernel v5.3.18. Nke a bụ mmelite na Linux Kernel v4.12, nke dị na Leap v15.1. The Leap kernel bụ otu ihe ahụ ejiri na SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2.
Ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị ihe niile, ebe ọ bụ na OpenSUSE Leap 15.2, ewebata kernel oge iji jikwaa mmekọrịta microprocessor iji rụọ ọrụ nke ọma iji mee ihe omume dị oke egwu.
Mgbanwe ọzọ nke pụtara ìhè na ụdị ọhụrụ nke openSUSE bụ nke ahụ A na-etinye Kubernetes na ngwugwu gọọmentị. Ebumnuche a iji nyere ndị ọrụ njedebe aka idozi ngwa ngwa, nha, ma jikwaa ngwa akpa.
Helm (onye njikwa ngwugwu maka Kubernetes) sokwa na ya. Ọ bụghị naanị na nke ahụ, ị ​​ga-ahụkwa mgbakwunye ndị ọzọ ebe a na-eme ka ọ dị mfe ịnwekọ na idokwa ngwa ọdịnala.
Na mgbakwunye na nke a, ị nwekwara ike ịchọta ọtụtụ mgbakwunye ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mfe iji chebe ma debe ngwa ndị nwere akpa.
N'aka nke ọzọ, ndozi dị na ebe desktọọpụ bụ Plasma 5.18 LTS, nke a bụ nkwado nkwado ogologo oge nke atọ sitere na otu KDE Plasma.
Leap 15.2 gụnyere ụdị LTS ọhụrụ a ọ bụ ezie na ndị KDE nyere aka ga-emelite ma jigide ya maka afọ abụọ na-esote (a na-edebe nsụgharị oge niile maka ọnwa 4). Na Plasma 5.18, enwere ike ịchọta atụmatụ ọhụrụ Ha na-eme ka amamọkwa doo anya, na-eme ka ntọala dịkwuo mma, na ọdịdị niile na-adọrọ adọrọ.
Ọzọkwa, openSUSE installer natara mmelite nke amam banyere ya Ha agbakwunyere ozi ndị ọzọ, nkwado maka asụsụ aka nri-gaa-aka ekpe dị ka Arabic, na mgbanwe aghụghọ iji mee ka ọ dị mfe ịhọrọ nhọrọ ozugbo ịwụnye oge.
N'ikpeazụ, ọzọ nke mgbanwe na-apụta ìhè na nke ọhụrụ a, bụ ndozi nke YaST.
Ọ bụ ezie na YaST adịworị ezigbo nrụnye na nhazi ngwa ọrụ, ụdị a na-agbakwunye ikike ịmepụta na ijikwa sistemụ Btrfs ma tinye usoro dị na nzuzo.
Ọzọkwa, ị kwesịrị ịmara nnweta OpenSUSE na Windows subsystem maka Linux. Ya mere, site na itu ukwu 15.2, ndakọrịta YaST na WSL ka mma dị ka ndetu ya.
BudataSUSE Leap 15.2
Maka ndị nwere mmasị ịnwale ule ọhụrụ a nke openSUSE Leap 15.2, ha ga-enwe ike inweta onyonyo nke sistemụ ahụ ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke nkesa.
Njikọ ga-enweta oyiyi ahụ bụ nke a.
Banyere ndị ka dị na mbipute gara aga ma chọọ imelite na ụdị ọhụrụ ahụ, ha nwere ike imelite nrụnye dị ugbu a na nke ọhụrụ a, ha nwere ike ịgbaso ntuziaka ndị ahụ. ntuziaka ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » openSUSE Leap 15.2 dị ugbu a yana nkwado maka ụfọdụ AI
Elementary OS 5.1.6, mbipute nke na-eme ka akụkụ ụfọdụ nke ngwa ahụ dịkwuo mma